သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ERP နှင့် CRM ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရန်။ | Linux မှ
၏ဆောင်းပါး၌တည်၏ သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသုံးပြုရန်အကြံဥာဏ်များ ကျနော်တို့မျိုးစုံအပေါ် commented အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်နည်းလမ်းများအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိသောဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အလွန်ဆင်တူသောလက္ခဏာများကိုဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့်ငွေအမြောက်အများကိုစုဆောင်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ဖော်ပြပါဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်များကို အခြေခံ၍ သင်၏အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားသင့်အားရှင်သန်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိုပါသည် သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အခမဲ့လျှောက်လွှာများဒီတော့များစွာသောဤပထမဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဆင့်ချင်းစီမျှဝေမည် တစ်ခု ERP နှင့် CRM ကို set up.
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသော ERP နှင့် CRM တို့ဖြစ်သည် Odoo ငါတို့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြောင်းပြောဆို ODOO: တစ်ခုခုပြောဖို့ပေးနေတဲ့ OpenSource ERP! နှင့်ငါတို့ဆောင်းပါးတွေအပေါ်အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် သုံးစွဲသူများကိုအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြင့်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း y အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း။ ဒီလက်တွေ့ကျတဲ့ကိစ္စအတွက်ကျနော်တို့ install လုပ်ပါလိမ့်မယ် O8O သည်၎င်း၏ VXNUMX ဗားရှင်းတွင်ရှိသည် OVA ၏အကူအညီဖြင့် TurnKey Linuxတစ်နည်းပြောရရင် Odoo စနစ်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော Debian-based virtual machine ကိုအသုံးပြုမည်။
1 သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ERP နှင့် CRM တည်ထောင်ရန်လိုအပ်ချက်များ
2 TurkeyLinux OVA ကို အသုံးပြု၍ Odoo ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
2.1 Odoo ကန ဦး သတ်မှတ်ချက်
2.2 Odoo ဖြန့်ကျက်မှုဆက်တင်များ
သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ERP နှင့် CRM တည်ထောင်ရန်လိုအပ်ချက်များ
Odoo ကဲ့သို့ ERP နှင့် CRM ကိုအရင်းအမြစ်အနည်းအကျဉ်းသာတပ်ဆင်ထားနိုင်သော်လည်း၎င်းကိရိယာ၏အသုံးပြုမှုပမာဏသည်အလွန်အကျွံမရှိသဖြင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် 1 GB ကျော်ရှိသောအခမဲ့သိုးထည်ရှိသည့်အသင်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ GB အာကာသနှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု၏ GB ကို။
ငါတို့ install လုပ်ထားရမယ် VirtualBox ထိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင် firewall ကို configure လုပ်ရန်နှင့် ports ဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန်အတွက်သင့်တော်သောခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုထည့်သွင်းထားသော ERP နှင့် CRM ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကို backup disk နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။
TurkeyLinux OVA ကို အသုံးပြု၍ Odoo ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ထံမှ TurkeyLinux မှထုတ်လုပ်သည့် Odoo Ova ကို Download လုပ်ပါ ဒီမှာ.
ယခင်သွားခဲ့သော VirtualBox မှ ova ကိုဤသို့သွားပါ ဖိုင် >> virtualized ဝန်ဆောင်မှုတင်သွင်းပါ။ Ova ကိုရွေး, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ နောက်တစ်ခု, virtual machine preference ကိုစစ်ဆေးရန် (သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်) (ram, cpu, name etc) ကိုနှိပ်ပါ တင်သွင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏ virtual machine ၏ကွန်ယက်ကိုအင်တာနက်မှ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့် host စက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန်ပြင်ဆင်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းသော virtual machine ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ပြီး >> select configuration> Network >> Adapter 1 >> Enable ကိုလုပ်ပါ။ ကွန်ယက် adapter >> Bridge Adapter >> ကိုချိတ်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ Adapter ကိုရွေးချယ်ပါ >> ထို့နောက်လက်ခံပါ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် Adapter2>> Enable Network adapter ကိုနှိပ်ပြီး >> ချိတ်ဆက်ထားမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် virtual machine ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Odoo အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ကန ဦး parameterization process ကိုစတင်သည်။
Odoo ကန ဦး သတ်မှတ်ချက်
Virtual Machine ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လည်ပတ်သောအခါ Debian ဖြင့်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုစတင်သည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ root password ကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပြီး Odoo ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သင့်တော်သောလည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုလည်းသတ်မှတ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ဒီကန ဦး Odoo သတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အသေးစိတ်အဆင့်များမှာ -
Debian Root စကားဝှက်ကို Login လုပ်ပါ။
Odoo ဒေတာဘေ့စ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်မည့် postgresql စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်စစ်ဆေးပါ။
Odoo ဒေတာဘေ့စ်လုပ်ဆောင်ချက်များအသုံးပြုသော Odoo ဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျက်နှာပြင်စကားဝှက်အတွက်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သင် TurnkeyLinux ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်၏ API Key ကိုရိုက်ပါသို့မဟုတ် Skip ကိုနှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့လိုအပ်သောလုံခြုံရေး updates များကို install လုပ်ပါ။
လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်ခြင်းသည်အဆင့်မြင့် (kernel update ကဲ့သို့) ဖြစ်ပါက update ကို configure လုပ်ရန်ပြန်လည်စတင်ရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် reboot လုပ်ပြီးစက်ကိုပြန်စတင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
Virtual Machine ကိုစတင်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုစတင်ပြီး configure လုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် Odoo ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်မည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အိုင်ပီနှင့်ပါ ၀ င်သောမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည် virtual machine မှကွန်ယက်၏ပုံသေ IP အတွက် dhcp မှပေးသော IP ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အကြံပြုပါသည်။ Advanced Menu >> Networking >> eth0 >> StaticIp နှင့်သက်ဆိုင်ရာဒေတာကိုထည့်ပါ။
Odoo မှစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစနစ်တကျစီမံပြီးသောအခါ၊ ဒေတာဘေ့စ်ဖန်တီးခြင်း၊ Odoo ၏အချက်အလက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူ Odoo အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်သို့ဆက်သွားပါမည် ။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဆောင်ရွက်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုအသေးစိတ်လိုက်နာပါ။
host ကွန်ပျူတာမှ (ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာမှမဆို) ကန ဦး အဆင့်တွင်ဖော်ပြထားသော Odoo IP ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ https://192.168.1.45၊
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ၊ ဝင်ရောက်ခွင့်စကားဝှက်နှင့်ဒေတာဘေ့စ်အမည်တစ်ခုရွေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုသည်စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များ (ကျွန်ုပ်တို့ဤကိရိယာကိုစမ်းသပ်လိုသောကိစ္စရပ်များအတွက်) နှင့်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒီအဆင့်ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပါပြီ ဒေတာဘေ့စ်ဖန်တီးပါ
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏စကားဝှက်မှာ 'admin' ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Odoo ကို Database နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Odoo အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံစေရန် Modules ကို install လုပ်နိုင်သည်။ တစ်ခုမှာရွေး။ install ကိုနှိပ်ပါ။
Odoo အပြင် Turnkey Linux Ova အပြင် console မှကျော်သော distro၊ ကျော်ကြားသော webmin panel၊ postgresql database manager အနေဖြင့် Adminer နှင့် SSH နှင့် SFTP ဆက်သွယ်မှုများကိုစီမံရန် Web Shell ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်ကိုသတိရပါ။ ဤအပလီကေးရှင်းများအားအသုံးပြုရန်ပုံမှန်အသုံးပြုသူများသည်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်
Webmin, SSH: အသုံးပြုသူ အမြစ်
PostgreSQL၊ အုပ်ချုပ်သူ - အသုံးပြုသူ နေပြည်တော်
Odoo Master အကောင့် - admin ရဲ့
ဤရိုးရှင်းသောနှင့်မြန်ဆန်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် Debian distro တွင် Odoo v8 ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ အကောင်းဆုံးနှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်ရန်ပြုပြင်ထားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ERP Odoo နှင့်ညှိရန်ခွင့်ပြုမည့်သင်ခန်းစာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုလေ့လာရမည်။
ဤအကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ၊ နောက်လာမည့်သင်ခန်းစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြစေလိုသည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျနော်တို့ဆက်လုပ် !!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ERP နှင့် CRM တစ်ခုကိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရန်
Deibis Contreras ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ဒိုမိန်းနှင့် SEO တို့ပါ ၀ င်သောအခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို upload တင်နိုင်သလားဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်မသိပါ။
deibis contreras အားပြန်ကြားပါ
အလွန်ကောင်းသောအထောက်အပံ့, ဤခေါင်းစဉ်၏ဆက်လက်ကြည့်ဖို့က configure နှင့်စတင်ပြီးသားဥပမာအချို့ကိုကြည့်ဖို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်, သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲကအခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ERC ကိုဖွင့်နိုင်တဲ့ modules တွေအခမဲ့ဖြစ်မလားဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။
အနာဂတ်သင်ခန်းစာများအတွက်၊ အွန်လိုင်း ၀ င်ရောက်မှုအတွက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလား၊ ငါဆိုလိုသည်မှာဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကို သုံး၍ အဝေးမှချိတ်ဆက်ထားသောရုံးများမှလက်တွေ့ကျကျအသုံးပြုခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုကုန်ကျစရိတ်များ၊ module ကုန်ကျစရိတ်များ၊ မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ။ , အသုံးပြုမှုအတွက်လျှောက်လွှာလုံခြုံရေး။
Erp သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့နှင့်အခမဲ့မော်ဂျူးများရှိသည်။ သို့သော်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ module များလည်းရှိသည်။ သင့်အားအကြံပေးသည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လည်းဖိုရမ်များရှိသည် (သူတို့၏အခကြေးငွေများအတွက်အများဆုံးပေးရသည်) ... ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သောအရာများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာရန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။ erp နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရဤ ERP သည်မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်၊ လိုအပ်သော modules များအကောင်အထည်ဖော်နေသရွေ့ငါဆိုလိုသည်မှာအသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများသည်နည်းစနစ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်၊ အနည်းငယ်ပို။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်ုပ်ရုံးအတွက် ERP + CRM ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရှာဖွေနေသည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်ုပ်၏ PC သည် virtualization အတွက်အလွန်နိမ့်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် (P4 2,8 single core ram 3gb) ကျွန်ုပ်မည်သို့ install ရမည်ကိုညွှန်ကြားချက်များကြည့်သင့်သည်။ လေးစားပါတယ်
ချစ်ခင်ရပါသောဒီလင့်ခ်မှ ISO ပုံရိပ်ကိုလည်းသင် download လုပ်နိုင်သည် https://www.turnkeylinux.org/download?file=turnkey-odoo-14.1-jessie-amd64.iso ၎င်းကို Linux distro ကဲ့သို့ထည့်သွင်းပါ။ သင့်အနေဖြင့်ပြnotနာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သာလျှင် virtualized မဟုတ်ဘဲသမားရိုးကျနည်းလမ်းဖြင့်သာတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမအဆင့်တွင်သင့်အားမေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ သင်တပ်ဆင်လိုသည့်အခန်းကန့်။ မည်သည့်မေးခွန်းမဆိုကျွန်ုပ်ကိုအသိပေးပါ
သင်အဖြေပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Odoo သုံးစွဲသူများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၌ကွန်ပျူတာများစွာရှိသည်။ Odoo သည် Chrome, Firefox သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် browser မှမဆိုလည်ပတ်သည်။ ၎င်းသည် operating system နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သာမန်အားဖြင့်၎င်းကိုအသေးစားကုမ္ပဏီများတွင်ငှားရမ်းရန် ပို၍ လက်တွေ့ကျပြီးစီးပွားရေးကျသော ၀ က်ဘ်ဆာဗာတွင်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုဟန့်တားနိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုသတိပြုမိစေပါ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်အနေဖြင့်သင်အနေဖြင့် Odoo ဖန်သားပြင် (အမိန့်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ ပေးပို့ရန်မှတ်စုများစသဖြင့်) တစ်ခုစီကိုဇillion tabs များဖွင့်လှစ်ခြင်းအဆုံးသတ်သွားသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ရမ်။ မှတ်ဥာဏ်ချဲ့ထွင်ခြင်းဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငါတို့မှာ 2GB ram ရှိတဲ့စက်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် 8 သို့မဟုတ် 16GB ရှိတဲ့ PC အသစ်တွေကိုတောင်းတယ်၊
မင်္ဂလာပါဂရီဂိုရီယို၊ Firefox ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုသင်အသုံးချနိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ Google လိုမျိုး YouTube အတွက်ဗီဒီယိုဖန်တီးသူများအစရှိသည့်အရာများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကြော်ငြာများအတွက်ငွေတောင်းခံနိုင်ပြီးသုံးစွဲသူသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး application များတွင်ယုတ္တိရှိသည့်အရာသည်အမြန်ဆုံးသို့မဟုတ်နောက်ကျရန်အတွက်ဖြစ်သည် (modules, functions, customizations, installation, consulting ... ) ။
Odoo သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်းအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်ဟုထင်မြင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ installer အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် - invoicescripts ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လျှောက်လွှာတစ်ခုချင်းစီသည်လုံးဝအခမဲ့ပေးသည့်အရာ၊ သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သော module များနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုကုန်ကျစရိတ်များ (တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်အခြားအရေးကြီးသော - လေ့ကျင့်ခြင်း) ကိုကောင်းစွာလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
ဖွန်ဆို ပီရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
dolibarr များအတွက်တစ် ဦး Howto လည်းကောင်းသောလိမ့်မည်။
တစ် ဦး ကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဆောင်းပါး။ ကျွန်ုပ်၏အထူးသဖြင့်ကိစ္စတွင်လက်ဝဲကြီးတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆာဗာတစ်ခုကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားတိုင်း၎င်းကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်ပြီးအခြေအနေကကျွန်ုပ်ကိုပြန်လှည့်သွားကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်၌ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည်မှာ၎င်းသည်သုံးနှစ်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းအားနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမှုတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ပျော်ရွှင်ပြီးအံ့အားသင့်ကြသည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ငါတို့မဆိုင်းမတွဘဲအကြံပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုရယူသည်။ ၎င်းတွင်စတိုး၊ အွန်လိုင်းအမှာစာများစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးမပါဘဲ tpv ကိုကန့်သတ်မထားပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၌ Windows နှင့် Linux နှစ်ခုလုံးပါသော PC များရှိသည်။ စနစ်ကိုတပ်ဆင်ရန်၊ ပြုပြင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ထံချဉ်းကပ်ခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ကြောင်းထောက်ပြရန်မှာ၊ တပ်ဆင်ခြင်းသည်လွယ်ကူပုံရသော်လည်းအများစုအတွက် (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့အတွက်) ပိုမို၍ အရာအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည် OS ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းအပြင် စတိုးဆိုင်ငယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်သာမန်တပ်ဆင်မှုသည်လုံလောက်ရုံထက်မကပေ။ သို့သော်သင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များသို့ရောက်သောအခါထောင်ပေါင်းများစွာသောမော်ဂျူးများရှိသည်၊ တစ်ခုစီသည်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်သင့်အတွက်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ကျောက်တံတား။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၊ ကုမ္ပဏီတွင်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များရှိပါကသို့မဟုတ်ငှားရမ်းပါက Odoo သည်မည်သူမဆိုအတွက်“ အလွန်အရေးကြီးသော” ချွေတာခြင်းဖြစ်သည်၊ ပရိုဂရမ်သည်သင့်အားမည်သည့်အရာမျှမကုန်ကျပါ၊ လိုင်စင်မရှိပါ။ ကိစ္စရပ်) သင်ကသူအတွက်သင့်အတွက်သိမ်းဆည်းရန်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းရမည် (၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ) ၎င်းသည်မည်သည့်လိုအပ်မှု၊ လွတ်လပ်သောကြောင့်အခြားစီးပွားဖြစ်ဖြေရှင်းချက်ထက် ပို၍ ကန့်သတ်မှုရှိသည်ဟုမည်သူမျှမယူမှတ်ပါစေနှင့်။
Mario J. Castañoအိပ်ချ် ဟုသူကပြောသည်
အကြောင်းအရာကိုဖတ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တွင်သံသယများ၊ စိုးရိမ်မှုများနှင့်ကွာဟချက်များစွာရှိသည်။ လာမယ့်အပိုင်းထွက်လာတခါငါသူတို့ကိုငါရှင်းလင်းနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Mario J. Castaño H. ကိုပြန်ပြောပါ
Odoo ကိုဘယ်လို configure နဲ့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာငါ့ကို Link (သို့) သင်ခန်းစာတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ (Pharmacy) တွင်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် Odoo 8 ကို install လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုအလုပ်မလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာ ပြုလုပ်၍ ၎င်းသည်အလွန့်အလွန်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲသည်။
ဒီမနက်မှာငါ iso ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး PC အဟောင်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ ဒီမှာရှင်းပြထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအရအားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်။ Odoo ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောဒီလည်ပတ်ရေးစနစ်နှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုအရန်သင့်သိမ်းဆည်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
မေးခွန်းတစ်ခုပဲ - xfce, gnome စတဲ့ desktop ကိုသင် install လုပ်လို့ရသလား။ သို့မဟုတ်စိတ်ကူးကဆာဗာတစ်ခုတည်းသာအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
သင်သည် desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို install လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် desktop ပတ်ဝန်းကျင်မရှိဘဲကျန်ရှိသောဝေးလံခေါင်ဖျားသောနေရာများသို့သွားရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်အရင်းအမြစ်များကိုနည်းနည်းပါးပါးသုံးစွဲပြီးသန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုရှိသည်။
_handle_exception တွင် "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", လိုင်း 539 ဖိုင်ကို
super (JsonRequest, self) သို့ပြန်သွားပါ ။_ handle_exception (ခြွင်းချက်)
dispatch ထဲမှာ "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", လိုင်း 576 file
ရလဒ် = self._call_function (** self.params)
_call_function တွင် "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", လိုင်း ၃၁၃ ဖိုင်ကို
self.endpoint သို့ပြန်သွားပါ (* args, ** kwargs)
__call__ တွင် "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", လိုင်း 805 ဖိုင်။
self.method သို့ပြန်သွားပါ (* args, ** kw)
response_wrap တွင် "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py", လိုင်း 405 ဖိုင်။
response =f(* args, ** kw)
ဖန်တီးရန် "လိုင်း ၇၀၃" /opt/openerp/odoo/addons/web/controllers/main.py "ဖိုင်လိုင်း ၇၀၃
proxy_method ရှိလိုင်း 881 "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py" ဖိုင် XNUMX ဖိုင်
ရလဒ် = dispatch_rpc (self.service_name, method, args)
dispatch_rpc ရှိလိုင်း ၁၁၅ "/opt/openerp/odoo/openerp/http.py" ဖိုင်နံပါတ် ၁၁၅
ရလဒ် = dispatch (နည်းလမ်း, params)
ပေးပို့ပါ "/opt/openerp/odoo/openerp/service/db.py", လိုင်း 65, ဖိုင်
check_super ထဲရှိ "/opt/openerp/odoo/openerp/service/security.py" ဖိုင်နံပါတ် ၃၂၊
ဖွင့်သည် openerp.exceptions.AccessDenied ()
ဟားဟား၊ အမှားအယွင်းအရအမူအကျင့်အားဖြင့် "admin" ကိုမာစတာစကားဝှက်အဖြစ်ရေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် odoo အတွက်ကျွန်ုပ်သတ်မှတ်ထားသောစကားဝှက်ကို system installation တွင်ထည့်လိုက်သည်နှင့်အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသွားသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းတယ် အလွန်ကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်, အချိန်ယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၌ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့် terminal တွင်တည်ရှိပြီး graphical environment ကိုမဖယ်ထားပါ။ ငါ xorg ကိုသွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကမစဘူး။ ငါဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရ၏ရာဇ ၀ တ်မှုများအားမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်စောင့်ကြည့်ရန် Ushahidi ဆာဗာကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း